Taariikh: ABDI MUSA MAYOW, SIYAASI IYO SHARCI YAQAAN - Somalia Focus
by admin | Friday, Dec 8, 2017 | 125 views
ABDI MUSA MAYOW
Waxaa uu kamid ahaa aas aasayaashii ururkii midnimada Hizbiya 1957, isaga oo agaasimay Bayaankii Labada Webi ( the Inter-riviene Manifesto) 1989. Waxaa uu ku dhashay Umur Beere meel u dhow Afgoye, waxaana uu ku dheeraaday Cilmiga Marine Science. Mudadii u dhaxeysay 1965 ilaa 1971 waxaa International Law ka bartay Kiev State University ee Midowgii Soviet kaddibna waxaa uu noqday Xaakimka maxkamadeed ee Muqdisho. 1973 waxaa loo magacaabay madaxa cadaaladda maxkamadda Alta Jubba fadhigeedu ahaa Baydhabo. Cabdi Musa waxaa uu iska casilay xilkii uu hayay waxaana uu horaantii 1980 kii yagleelay shirkad gaar loo leeyahay oo sharciga ka shaqeysa.
Xilliyadan uu aas aasayay shirkadda ayuu sidoo kale si qarsoodi ah ugu biiray dhaqaaq bulshada degta inta u dhaxeysa labada webi ay kaga soo horjeedeen nidaamkii Siyaad Barre.
Xilligani, dadka mucaaradsan Jaalle Siyaad ayaa badankood ahaa kuwo qurbaha ku nool ama kujira xabsi gudaha dalka ah. 1990 Cabdi Musa ayaa noqday hogaamiyaha SDM waxaana uu kamid ahaa dadkii u ol oleeyay in faragelin caalami ah lagu sameeyo Soomaaliya taasi oo ugu dmabeyn keentay howlgalkii Rajo soo celinta, taageerayna hergelinta howlgalkii qaramada midoobay ee Soomaaliya ( UNOSOM).
Waxaa uu u ol oleeyay hub ka dhigis ka dhacda guud ahaan dalka si wada-hadal iyo heshiisiin ay u dhacdo. Cabdi Musa ayaa SDM ku matalay heerar kala duwan.
Maxamed Cali Xaamud nidaam uu hogaaminayay oo loo arkayay mid loolan ku ah Cabdi Musa ayaa midnimadooda waxaa ka dhashay Shirweynihii Digil Mirifle ee Baydhabo bishii August 1995 halkaasi oo lagu dhisay Dowlad goboleedkii ugu horeeyay oo uu hogaamiye ka noqday Dr. Xasan Sheekh Ibraahim “Hassey” mid kamid ah lixdii xubnood ee sida joogtada ah ugu kala wareegi jiray hoggaanka golihii sare ee Digil Mirifle ( DMSGC).
Hogaamiye Cabdi Musa ayaa ka fadhiistay howlaha Siyaasadda 1999.